New ule na-eji otu dobe ọbara ikpughe dum akụkọ ihe mere eme nke malitere ịrịa ọrịa - News Ọchịchị
New ule na-eji otu dobe ọbara ikpughe dum akụkọ ihe mere eme nke malitere ịrịa ọrịa
Isiokwu a na-akpọ “New ule na-eji otu dobe ọbara ikpughe dum akụkọ ihe mere eme nke malitere ịrịa ọrịa” e dere site Ian ịlele Science nchịkọta akụkọ, n'ihi na The Guardian na Thursday 4th June 2015 18.00 UTC
Na-eme nchọpụta mepụtara a ọnụ ala ma na ngwa ngwa ule na-ekpughe onye zuru akụkọ ihe mere eme nke malitere ịrịa ọrịa si otu dobe ọbara.
Ule ekwe ka ndị dọkịta na-agụ si ndepụta nke nje na oria, ma ọ bụ ịnọgide na-efe, ọrịa ọbụna mgbe ha na-adịghị mere ọ bụla doro anya mgbaàmà.
The technology pụtara na GPS ike enyocha ọrịa niile nke nje ike nke na-ibunye ndị. Ọ pụrụ ịgbanwe nchọpụta nke oké njọ na-efe efe dị ka ịba ọcha n'anya C na HIV, nke ndị mmadụ pụrụ ibu n'ihi na afọ n'amaghị.
"Nọmalị, mgbe a dọkịta chọrọ ịmata ma ọ bụrụ na onye e oria na a virus, ha nwere na-eche na ihe virus bụ, na ahụ anya kpọmkwem maka na virus,"Kwuru Stephen Elledge, emi ada oru ngo na Brigham na Inyom Hospital na Boston.
"Nke a pụrụ iduga a na-achọpụta ebe ndị mmadụ na-aga kwa afọ na nke dọkịta ha na-esi na ha malitere ịrịa akụkọ ihe mere eme dere. Ọ nwere ike N'ezie achọpụta malitere ịrịa ọrịa na ndị dị oké njọ na a ndidi amaghị na ha nwere,"Ka o kwuru.
The (£ 16) ule adọta ọganihu sịntetik usoro ndu na ngwa ngwa site n'usoro sequencing iji nyochaa ihe karịrị 1000 akpata nsogbu nke mmadụ nje na otu ngafe. Ruo ugbu a, ọtụtụ ule anya maka naanị otu virus na oge. Elledge-eme atụmatụ na ndị ọhụrụ ule, na-akpọ VirScan, nwere ike hazie 100 samples abụọ ụbọchị atọ.
Related: WHO na-anakwere-ewe minit 15 ule Ebola
Ule ịkpa eziokwu na dịghịzi usoro na-eme ka-alụso ọrịa ọgụ na-alụ ọgụ nje mgbe ọ bụla ahụ na-aghọ oria. Ndị a-alụso ọrịa ọgụ pụrụ ibi ndụ na ke n'ọbara n'ihi na afọ na ọbụna ọtụtụ iri afọ.
Ịzụlite ule, Elledge engineered batches nke na-adịghị njọ nje na-ebu ibe n'ibe nke na-edozi mmadụ nje na ha na-ebupụta. Na ngụkọta, ha rụrụ na-edozi ihe karịrị 1000 akpata nsogbu nke 206 di iche iche, nke nje mara ife efe ndị. -Alụso ọrịa ọgụ na-eji ihe ndị a protein iberibe na-aghọta mwakpo nje virus na-ẹkedori ha ọgụ.
Mgbe a droplet ọbara onye ọrịa na-agwakọta ya na gbanwetụrụ nje, ọ bụla-alụso ọrịa ọgụ na ha nwere lash na mmadụ virus na-edozi ha na-aghọta ka mwakpo. Ndị ọkà mmụta sayensị ahụ dọpụtaara-alụso ọrịa ọgụ ma mata na ndị mmadụ nje si protein iberibe ha nọgidere na-.
"Ọ bụ oge mbụ anyị na-na na ike na-ele anya na a kpam kpam ebinyeghị akụkụ n'ụzọ ihe na nje virus na-ibunye ndị, na anyị nwere ike ime ya ihe niile mara nje,"Kwuru Elledge. Ule kọwakwara-alụso ọrịa ọgụ a onye na-arụpụta si yana ịgba ọgwụ mgbochi, ma ndị a nwere ike tụfuo si ule results. Nkọwa na-kọrọ na magazin Science.
Na ngosipụta nke nkà na ụzụ, ìgwè nyochaa ọbara 569 ndị mmadụ na US, South Africa, Thailand na Peru. Ule chọpụtara na, na nkezi, ndị e oria na 10 umu nke nje, ezie na ọ dịkarịa ala, mmadụ abụọ na-ekpe ikpe nwere akụkọ nke 84 na-efe efe si dị iche iche iche iche nke nje.
Ndị kasị na-efe efe ndị herpes nje, nke ime ka oyi sores, enteroviruses na iwe iwe stomaches, influenza, na rhinoviruses na ịkpalite nkịtị oyi. Ndị na-US ama nwetara ole na ole na-efe efe karịa ndị na mba ndị ọzọ, na dị ka na-atụ anya, ndị agadi nwere ano malitere ịrịa akụkọ karịa na-eto eto.
Ule nwere ike ime ka banyere isi uru n'ihi na ngwa transplant ọrịa. Otu nsogbu nke nwere ike na-eso transplant ịwa ahụ bụ na-atụghị anya reawakening nke nje na lurked-adịghị ejekwa ozi na ndidi ma ọ bụ na-enye onyinye maka afọ. Ndị a nje nwere ike ịlaghachi na ike mgbe ọrịa dịghịzi usoro na-ewute na ọgwụ ọjọọ eme ihe iji gbochie ha na-ajụ ngwa. Standard ule mgbe na-bulie latent nje tupu a waa, ma VirScan usoro nwere ike na-ekpughe ọnụnọ ha na njikere dọkịta na ndị ọrịa ihe ize ndụ.
"Nke a nwere ike ịbụ nnọọ oké ọnụ ahịa,"Kwuru Iwijn De Vlaminck, a biomedical engineer na Cornell University ke New York, bụ onye na-adịghị etinye aka na ọmụmụ. "Gịnị a na-enye gị ka i mee bụ anya n'ime gara aga tụọ mmadụ n'ebe gara aga na-efe efe. Na nwere ihe dị mkpa uru, n'ihi na i nwere ike ịchọpụta ndị a na-efe efe na-aga latency. I nwere ike enyocha ọbara site n'aka ndị ọrịa na ngwa donors na nke a sara mbara nke ukwuu n'ụzọ na-ekwu nwere ike n'ọdịnihu mbipụta na malitere ịrịa reactivation. "
Ọkà mmụta sayensị kweere ule ga-achụpụ ìhè na otú ụfọdụ malitere ịrịa ọrịa nwere ike predispose ndị mmadụ yiri agbasaghị ọrịa mgbe e mesịrị na ndụ. Ụfọdụ na-efe efe nwere ike ime ka-adịgide adịgide mmebi ka ozu anụ ahụ, ma ọ bụ na-agbanwe ihe dịghịzi usoro, ihe n'ụzọ na-ahapụ ndị ọzọ n'ihe ize ndụ nke ike nsogbu mgbe ha bụ ndị okenye. Ọmụmaatụ, ọrịa na Epstein-Barr virus nwere ike welie ize ndụ nke kansa. Ma, olee otú ndị ọzọ nje emetụta ogologo okwu ahụ ike dị nnọọ murkier. "Nke ahụ ụdị analysis bụ ihe a n'ezie na-eme ka o kwere omume,"Kwuru Elledge.
Nwere ike ọchịchọ ịmata agbam ume Memory Ma Learning?
16266	0 Aids and HIV, Nkeji edemede, N'ihi mmiri ọgwụ na molekụla usoro ndu, Biology, Hepatitis C, Ian Sample, Immunology, Main ngalaba, Medical research, Science, The Guardian, UK ozi ọma
← Olee otú gị anya rara echiche gị N'elu anọ oge a killers na n'ebe ọdịda anyanwụ →